नैतिकता - विकिपिडिया
आचारशास्त्र (एथिक्स)का व्यवहारदर्शन, नीतिदर्शन, नीतिविज्ञान, नीतिशास्त्र आदि नाम पनि दिइन्छ। यद्यपि आचारशास्त्रको परिभाषा तथा क्षेत्र प्रत्येक युगमा मतभेदका विषय रहे छन्, फेरि पनि व्यापक रूपबाट यो भन्नसक्दछ कि आचारशास्त्रमा ती सामान्य सिद्धान्तहरूका विवेचन हुन्छ जसका आधारमा मानवीय क्रियाहरू र उद्देश्यहरूका मूल्हरूकन सम्भव छ सके। अधिकतर लेखक र विचारक यस कुराबाट पनि सहमत हुन् कि आचारशास्त्रको सम्बन्ध मुख्यत: मानंदडहरू र मूल्यहरूबाट छ, न कि वस्तुस्थितिहरूका अध्ययन वा हराजबाट , र यी मानदंडहरूका प्रयोग न केवल व्यक्तिगत जीवनका विश्लेषणमा गरे जान चाहिन्छ वरन् सामाजिक जीवनका विश्लेषणमा भी।
२ नीतिशास्त्रको मूलप्रश्न
३ नीतिशास्त्रको सम्स्याहरू
४ पाश्चात्य दर्शनहरूमा परम श्रेयका सम्बन्धमा अनेक मतवाद पाइन्छन् :
४.१ परम श्रेय अथवा शुभ-अशुभका ज्ञानको साधन
४.२ गर्तृ स्वातन्त्र्य बनाम निर्धारणवाद
४.३ यिनलाई पनि हेर्नुहोस्
४.४ बाहिरी कडिहरू
मनुष्यका व्यवहारको अध्ययन अनेक शास्त्रहरूमा अनेक दृष्टीहरूबाट गरे जान्छ। मानवव्यवहार, प्रकृतिका व्यापारहरूको भांति, कार्य-कारण-श्रृंखलाका रूपमा हुन्छ र उनको कारणमूलक अध्ययन एवं व्याख्याको जान सक्छ। मनोविज्ञान यहिएर ्दछ। तर प्राकृतिक व्यापारहरूको हामी राम्रो वा बुरा भन्एर विशेषित नगरते। बाटामा अचानक वर्षा आ जालेबाट भीगनेमा हामी बादलहरूको कुवाच्य नभन्न लगते। यसका विपरीत साथी मनुष्यहरूका गर्महरूमा हामी बराबर भले-बुरेको निर्णय दे्दछन्। यस प्रकार निर्णय दिनको सार्वभौम मानवीय प्रवृत्ति नैं आचारदर्शनको जननी छ। आचारशास्त्रमा हामी व्यवस्थित रूपबाट चिंतन गरदै यो जाननेको प्रयत्न गर्दछन् कि हाम्रा राम्रोई-कमजोरीका निर्णयहरूका बुद्धिग्राह्य आधार के छ। भन्न्छ, आचारशास्त्र नियामक अथवा आदर्शान्वेषी विज्ञान छ, जबकि मनोविज्ञान याथार्थान्वेषी शास्त्र छ। निश्चय नैं शास्त्रहरूका यस वर्गीकरणमा केही तथ्य छ,मा त्यो भ्रामक पनि छ सक्दछ। उक्त वर्गीकरण यो धारणा उत्पन्नेर सक्दछ कि आचारदर्शनको काम नैतिक व्यवहारका नियमहरूका अन्वेषण तथा उद्घाटन छैन, अपितु कृत्रिम ढंगबाट वैबाट नियमहरूको मानव समाजमा लाद दिन छ। तर यो धारणा गलत छ। नीतिशास्त्र जस नैतिक नियमहरूको हराज गर्दछ ती स्वयं मनुष्यको मूल चेतनामा निहित छन्। अवश्य नैं यो चेतना विभिन्न समाजहरूतथा युगहरूमा विभिन्न रूप धारण गरती दिखाई दिन्छ। यस अनेकरूपताको प्रधान कारण मानव प्रकृतिको जटिल्दै तथा मानवीय श्रेयको विविधरूप्दछ। विभिन्न देशकालहरूका विचारक आफ्ना समाजहरूका प्रचलित विधिनिषेधहरूमा निहित नैतिक पैमानहरूका नैं अन्वेषण गर्दछन्। हाम्रा आफ्ना युगमा ही, अनेक नयाँ पुरानो संस्कृतिहरूका सम्मिलनका कारण, विचारकहरूका लागियो सम्भव छ सक्दछ कि ती अनगिनत रूढीहरू तथा सापेक्ष्य मान्यताहरूबाट माथि उठएर वस्तुत: सार्वभौम नैतिक सिद्धान्तहरूका उद्घाटनतर्फ अग्रसर हुँं।
नीतिशास्त्र सकिरा रिहानाको मूल प्रश्न के छ, यस सम्बन्धमा दुई महत्त्वपर्ण मत पाइन्छन्। एक मंतव्यका अनुसार नीतिशास्त्रको प्रधान समस्ए यो बतल्याउन छ कि मानव जीवनको परम श्रेय (समम बोनम) के छ। परम श्रेयको बोध छ जानेमा हामी शुभ गर्म ती्हहरू कहहरूगे जो उनी श्रेयतर्फ लि जानेवालाहरू हुन्; विपरीत गर्महरूको अशुभ भन्नेछ। दोस्रो मंतव्यका अनुसार नीतिशास्त्रको प्रधान कार्य शुभ वा धर्मसंमत (राइट)को धारणालाई स्पष्ट गर्ना छ। दोस्रो शब्दहरूमा, नीतिशास्त्रको कार्य उनी नियम वा नियमसमूहको स्वरूप स्पष्ट गर्ना छ जस वा जसका अनुसार अनुष्ठित गर्म शुभ अथवा धार्मिक हुन्छन्। वा दुई मंतव्य दुई भिन्न कोटीहरूको विचारपद्धतीहरूलाई जन्म दे्दछन्।
परम श्रेयको भोलि/हिजो्पना अनेक प्रकारबाट गरियो है; यी भोलि/हिजो्पनाहरू अथवा सिद्धान्तहरूका वर्णन हामी अगाडि गरहरूगे। यहाँ हामी संक्षेपमा यो विमर्श गरहरूगे कि नैतिकताका नियम-यदि वैबाट कुनै नियम हुन्छन् तो-कस कोटिका छ सक्दछन्। नियम वा कानुनको धारणा वा त राज्यका दंडविधानबाट आउँछए भौतिक विज्ञानहरूसे, जहाँ प्रकृतिका नियमहरूका उल्लेख गरे जान्छ। राज्यका कानुन एक प्रकारका शासकहरूको न्यूनाधिक नियन्त्रित इच्छा द्वारा निर्मित हुन्छन्। ती कहिले-कहिले केही वर्गहरूका हितका लागिबनाए जान्छन्, ती्हहरू तोडा पनि जानसक्दछ र तीका पालनबाट पनि केही मान्छेको हानि छ सक्छ। यसका विपरीत प्रकृतिका नियम अखंडनीय हुन्छन्। राज्यका नियम बदले जानसक्दछन्, तर प्रकृतिका नियम अपरिवर्तनीय छन्। नीति वा सदाचारका नियम अपरिवर्तनीय, पालनेर्ताका लागिभोलि/हिजो्याणकर एवं अखंडनीय समझे जान्छन्। यी दृष्टीहरूबाट नीतिशास्त्रका नियम स्वास्थ्यविज्ञानका नियमहरूका पूर्णतए समान हुन्छन्। यस्तो जान पड्दछ कि मनुष्य अथवा मानव प्रकृति दुई भिन्न कोटीहरूका नियमहरूका नियन्त्रणमा व्यापृत हुन्छ। एक ओर त मनुष्य ती कानुनहरूका वशवर््दछजसको उद्घाटन वा निरूपण भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, मनोविज्ञान आदि तथ्यान्वेषी (पाजिटिव) शास्त्रहरूमा हुन्छ र दोस्रो ओर स्वास्थ्यविज्ञान, तर्कशास्त्र आदि आदर्शान्वेषी विज्ञानहरूका नियमहरूका, जिनबाट त्यो बाध्य त नहुँता,मा जसको पालन उनको सुख तथा ती्नतिका लागिआवश्यक छ। नीतिशास्त्रका नियम यस दोस्रो कोटिका हुन्छन्।
नीतिशास्त्रको समस्याहरूलाई हामी तीन वर्गहरूमा बांट सक्दछन् :
परम श्रेयको स्वरूप के छ?
परम श्रेय अथवा शुभ अशुभका ज्ञानको श्रोत वा साधन के छ?
नैतिक आचारको अनिवार्यताका आधार (सैंक्शंस) के हुन्? परम श्रेयका बारेमा पूर्व र पश्चिममा अनेक भोलि/हिजो्पनाहरू गरियो छन्। भारतमा प्राय: सबै दर्शन यो मान्दछन् कि जीवनको चरम लक्ष्य सुख छ, तर तीमाबाट अधिकांशको सुख सम्बन्धी धारणा तथाकथित सौख्यवाद (हेडसिनज्म)बाट नितांत भिन्न छ। यस दोस्रो वा प्रचलित अर्थमा हामी केवल चार्वाक दर्शनलाई सौख्यवादी कह सक्दछन्। चार्वाकका नैतिक मंतव्यहरूका कुनै व्यवस्थित वर्णन उपलब्ध छैन, तर यो समझा जान्छ कि उनको सौख्यवादमा स्थूल ऐंद्रिय सुखलाई नैं महत्त्व दिइएको छ। भारतका दोस्रो दर्शन जस आत्यंतिक सुखलाई जीवनको लक्ष्य कहन्छन् उबाट अपवर्ग, मुक्ति वा मोक्ष अथवा निर्वाणबाट समीकृत गरिएको छ। न्याय तथा सांख्य दर्शनहरूमा अपवर्ग वा मुक्तिको भोलि/हिजो्पना गरियो छ, उबाट भावात्मक सुखरूप भन्न सकिन्न तर उपनिषदहरूतथा वेदांतको मुक्तावस्था आनंदरूप कही जान सक्छ। वेदांतको मुक्ति तथा बौद्धहरूका निर्वाण, दोनहरूही उनी स्थितिका द्योतक हुन् जब व्यक्तिको आत्मा सुख दु:ख आदि द्वंद्वहरूबाट परे छ जान्छ। यो स्थिति जीवनकालमा पनि आ सक्छ; भगवद्गीतामा स्थितप्रज्ञ भनिएको छ त्यो एक प्रकारबाट जीवन्मुक्त नैं भन्नसक्दछ।
पाश्चात्य दर्शनहरूमा परम श्रेयका सम्बन्धमा अनेक मतवाद पाइन्छन् :सम्पादन
सौख्यवादी सुखलाई जीवनको ध्एय घोषित गर्दछन्। सौख्यवादका दुई भेद हुन्-व्यक्तिपरक सौख्यवाद तथा सार्वभौम सौख्यवाद। प्रथमका अनुसार व्यक्तिका प्रयत्नहरूका लक्ष्य स्वयं उनको सुख छ। दोस्रोका अनुसार हमा सबैका सुख अथवा "अधिकांश मनुष्यहरूका अधिकतम सुख"लाई लक्ष्य मानेर चल्नु चाहिन्छ। केही विचारकहरूका अनुसार सुखहरूमा सिर्फ मात्राको भेद हुन्छ; दूसरहरूका अनुसार तीमा घटिए बढिए का, अर्थात् गुणात्मक अन्तर पनि रहन्छ।
अन्य विचारकहरूका अनुसार जीवनको चरम लक्ष्य एवं परम श्रेय पूर्णत्व छ, अर्थात् मनुष्यको विभिन्न क्षमताहरूको पूर्ण विकास।
केही अध्यात्मवादी अथवा प्रत्ययवादी चिंतकहरूले आत्मलाभ (सेल्फरियलाईजेशन)लाई जीवनको ध्येय मानेका छन्। तीका अनुसार आत्मलाभको अर्थ छ आत्माका बौद्धिक एवं सामाजिक अंगहरूका पूर्ण विकास थियो उपभोग।
केही दार्शनिकहरूका मतमा परम श्रेय गर्तव्यरूप वा धर्मरूप है; नैतिक क्रियाको लक्ष्य स्वयं नैतिकता वा धर्म नैं छ।
परम श्रेय अथवा शुभ-अशुभका ज्ञानको साधनसम्पादन
हाम्रा परम श्रेय अथवा शुभ-अशुभका ज्ञानको साधन वा श्रोत के छ, यस सम्बन्धमा पनि विभिन्न मतवाद छन्। अधिकांश प्रत्ययवादीहरूका मतमा भलाइ-कमजोरीलाई बोध बुद्धि द्वारा हुन्छ। हेगेल, ब्रैडले आदिको मत यही छ र कांटको मंतव्य पनि यसका विरोधी छैन। कांट मान्दछन् कि अंतत: हमारी कृत्यबुद्धि (प्रैक्टिभोलि/हिजो रीजन) नैं नैतिक आदर्शहरूका श्रोत छ। अनुभववादीहरूका अनुसार हाम्रा शुभ अशुभका ज्ञानको श्रोत अनुभव नैं छ। यो मत नैतिक सापेक्ष्यतावाद (एथिभोलि/हिजो रिलेटिविटिज्म)लाई जन्म दे्दछ। तेस्रो मत प्रतिभानवाद अथवा अपरोक्षतावाद (इंटुइशनिज्म) छ। यस मतका अनुसार हाम्रा भित्र एक यस्तो शक्ति छ जो साक्षात् ढंगबाट शुभ अशुभलाइ चिन्हारी वा जान लिन्छ। प्रतिभानवादका अनेक रूप छं। शैफ्टसबरी र हचेसन नामक ब्रिटिश दार्शनिकहरूका विचार थियो कि रूप रस आदिलाई ग्रहण गर्नेवाला इंद्रीहरूको नैं भांति हाम्रा भित्र एक नैतिक इंद्रिय (मरलबाट ंस) पनि हुन्छजो सीधा भलाइ कमजोरीलाई देख लिन्छ। बिशप बटलर नामका विचारकका मतमा हाम्रा भित्र सदसद्बुद्धि (कांश्यंस) नामको एक प्रेरक वृत्ति हुन्छजो स्वार्थ तथा परार्थका बीच उठनवालाहरू द्वंद्वको समाधान गरदै हमा औचित्यको मार्ग दिखलाउँछ। हाम्रा आचरणको अनेक प्रेरक वृत्तिहरू हुन्; एक वृत्ति आत्मप्रेम (शेल्फ लव) छ, दोस्रो पर-हित-आकांक्षा (बेनीवोलहरूस)। सदसद्बुद्धिको स्थान यी दोनहरूबाट माथि छ, त्यो यी दोनहरूका माथि निर्णायक रूपमा प्रतिष्ठित छ। जर्मन विचारक कांटको गणना प्रतिभानवादीहरूमा पनि गरिन्छ। प्रतिभानवादी नैतिक सिद्धान्तहरूका एक सामान्य लक्षण यो छ कि ती कुनै कार्यको भलाइ कमजोरीका निर्णयका लागिउनको परिणामहरूमा ध्यान दिन आवश्यक नसमझते। कुनै गर्म यसलिए शुभ वा अशुभ नबन जाता कि उनको परिणाम एक वा दोस्रो कोटिका छन्। वा कुनै कार्यका समस्त परिणामहरूको पूर्वभोलि/हिजो्पना त्यस्तो नैं कठिन छ जस्तो कि तीपर नियन्त्रण गरेर सकना। गर्मको राम्रोई कमजोरी उनको प्रेरणा (मोटिव)बाट निर्धारित हुन्छ। जस गर्मका मूलमा शुभ प्रेरणा छ त्यो सत् गर्म छ, अशुभ प्रेरणामा जन्म लिनवालाएर ्म असत् गर्म वा पाप छ। कांटेको कथन छ कि शुभ संभोलि/हिजो्पबुद्धि (गुडविल) एक यस्तो चीज छ जो स्वयं श्रेयरूप छ, जसको श्रेयत्व निरपेक्ष एवं निश्चित है; शेष सबै वस्तुहरूको श्रेयत्व सापेक्ष हुन्छ। केवल शुभ संभोलि/हिजो्पशक्ति नैं आफ्नो श्रेयरूप ज्योतिबाट प्रकाशित हुन्छ।
नैतिक शुभ-अशुभका ज्ञानको श्रोत के छ, यस सम्बन्धमा भारतीय विचारकहरूले पनि धेरै मत प्रकट गरिएको छन्। मीमांसा दर्शनका अनुसार श्रुति द्वारा प्रेरित आचार नैं धर्म छ र श्रुति वा वेदद्वारा निषिद्ध गर्म अधर्म। यस प्रकार धर्म एवं अधर्म श्रुतीहरूका विधि-निषेध-मूलक छन्। भगवद्गीतामा निष्काम गर्मयोगको शिक्षा सहित-साथ यो बतलाईएको छ कि गर्तव्या-कर्तव्यको जानकारीका लागिशास्त्र नैं प्रमाण छ। शास्त्रका अन्तर्गत श्रुति तथा स्मृति दोनहरूका परिगणन हुन्छ। हिंदू धर्मका प्रत्येक वर्ण तथा आश्रमका लागिअलग-अलग गर्तव्यहरूका निर्देश गरिएको है; यी गर्तव्यहरूका विशद विवेचन धर्मसूत्रहरूतथा स्मृतिग्रन्थहरूमा मिल्दछ। यस कोटिका गर्तव्यहरूका अतिरिक्त सामान्य धर्म अथवा सार्वभौम धर्मनियमहरूका बोधका लागिको पनि प्रमाण मानिएको छ। सज्जनहरूका आचारलाई पथप्रदर्शक रूपमा स्वीकार गरिएको छ।
नैतिक आचरणको अनिवार्यताका आधार पनि अनेक रूपहरूमा भोलि/हिजो्पित भएका छन्। मनुष्यका इतिहासमा नैतिकताको सबबाट महत्त्वपूर्ण नियामक धर्म (रिलीजन) दै छ। हमा नैतिक नियमहरूका पालन गर्ना चाहिन्छ, किनकि त्यस्तो ईश्वर वा धर्मव्यवस्थालाई इष्ट छ। सदाचारको दोस्रो नियामक शक्ति राज्य छ। मान्छेको अनैतिक कार्यहरूबाट विरत गर्नेमा राजाज्ञा एक महत्त्वपूर्ण हेतु हुन्छ। यसै प्रकार समाजको भय पनि नैतिक नियमहरूको शक्ति दे्दछ। काउँटका अनुसार हमा स्वयं धर्मका लागिधर्म गर्ना चाहिन्छ; गर्तव्यपालन स्वयं आफ्नामा इष्ट वा साध्य वस्तु छ। जो विचारक गर्तव्या-कर्तव्यलाई परमश्रेयको अपेक्षाबाट रक्षित गर्दछन्, ती कह सक्दछन् कि नैतिक आचारणको प्रेरणा मूलत: आत्मोन्नतिको प्रेरणा छ। हामी शुभ गर्म गर्दछन्, किनकि त्यस्तोएरलेबाट हामी आफ्ना परम श्रेयतर्फ प्रगति गर्दछन्।
गर्तृ स्वातन्त्र्य बनाम निर्धारणवादसम्पादन
नीतिशास्त्रको एक महत्त्वपूर्ण समस्ए यो छ कि के मनुष्य गर्मका लागिस्वतन्त्र छ? जब हामी एक व्यक्तिलाई उनको कुनै कार्यका लागिभला बुरा कहन्छन्, तब स्पष्ट नैं उबाट उनी कार्यका लागिउत्तरदायी मान लिँदछन्, जसको मतलब हुन्छ यो प्रच्छन्न विश्वास छ कि त्यो व्यक्ति विचाराधीन कार्य गर्ले न गर्नेका लागिस्वतन्त्र थियो। काउँट कहन्छन् : चूँकि मलाई गर्ना चाहिन्छ, यसलिए म गरेर सक्दछु। तात्पर्य यो कि गर्ताको स्वतन्त्रतालाई माले बिना नैतिक जीवन एवं नैतिक मूल्यांकनको व्यवस्था सम्भव नदीखती। हामी प्रकृतिका व्यापारहरूको भला बुरा नकहते, केवल मनुष्यका गर्महरूमा नैं त्यस्तो निर्णय दे्दछन्; यसबाट जान पड्दछ कि प्राकृतिक तथा मानवीय व्यापारहरूमा केही अन्तर छ। यो अन्तर मनुष्यको स्वतन्त्रताका कारण छ। कुनै क्रियाका अनुष्ठानलाई इच्छाको विषय बनाउन न बनाउनमा मनुष्यको संभोलि/हिजो्पबुद्धि (विल) स्वतन्त्र छ।
निर्धारणवाद (डिटरमिनिज्म)का पोषकहरूको उक्त मत ग्राह्य छैन। भौतिक विज्ञान बतलाउँछ कि विश्वब्रह्मांडमा सर्वत्र कार्य-कारण-नियमको अखण्ड शासन छ। प्रत्येक वर्तमान घटनाको निर्धारण अतीत हेतुहरू (कण्डिशंस)बाट हुन्छ। संपूर्ण विश्व एक बृहत् कार्य--कारण-परम्परा छ। सबै प्रकारको घटनाहरू अखण्ड नियमहरूका अधीन छन्। यस्तो दशामा यो कैबाट माना जानसक्दछ कि मनुष्य संभोलि/हिजो्प विभोलि/हिजो्प तथा व्यापार अकारण एवं नियमहीन हुन्छन्? मनुष्यका क्रियाभोलि/हिजोापहरूको विश्वका घटनासमूहमा अपवादरूप नमाना जानसकता। यदि अनेक अवसरहरूमा हामी मानवीय व्यापारहरूका सम्बन्धमा सफल भविष्यवाणी नगर सक्त त यसका कारण हमारी ती व्यापारहरूका नियामक नियमहरूको अपूर्ण जानकारी छ, न कि ती व्यापारहरूको नियमहीनता।
निर्धारणवादका सिद्धान्तलाई भौतिक शास्त्रहरूबाट बल मिलेको छ ; उबाट प्रकृतिजगत्को यन्त्रवादी व्याख्याबाट पनि अवलंब मिल्दछ। तर यसका यो मतलब नकि निर्धारणवाद एक भौतिक सिद्धान्त छ। भनिएको छ कि स्पिनोजा तथा हेगेलका दर्शनहरूमा व्यक्तिको स्वतन्त्रताका लागिकुनै स्थान छैन। सांख्य दर्शनमा पुरुषलाई निर्गुण तथा निष्क्रिय मानिएको छ। समस्त गर्महरूको बुद्धिमा आरोपित गरिएको छ र बुद्धिलाई तीन गुणहरूबाट सञ्चालित बतलाईएको छ। गीतामा लेखा छ- सारा कार्य प्रकृतिका तीन गुणहरूद्वारा गरे जाते हहरू, अहंकारवश मनुष्य आफ्ना कोएर्ता मान लिँदछ। गीतामा नैं प्रत्येक गर्मका सांख्यसम्मत पाउँच कारण गिनाइएका छन्, अर्थात् अधिष्ठान, कत्र्ता, गरण, विविध चेष्टाहरू र दैव; यस्तो दशामा केवल गर्मका लागिउत्तरदायी भन्न सकिन्न।
मैकहरूजी आदि केही विचारक उक्त दोनहरूमतहरूबाट भिन्न आत्मनिर्धारणवाद (सेल्फ-डिटरमिनेशन)का सिद्धान्तलाई मान्दछन्। जहाँ मनुष्य स्वतन्त्रताको भावनाबाट गर्म गर्दछ, वहाँ गर्म स्वयं उनको व्यक्तित्वमा निहित शक्तिहरू द्वारा निर्धारित हुन्छ। यस अर्थमा मनुष्य स्वतन्त्र छ। बुरे काम पछि उत्पन्न हुँनेवाला पश्चात्तापको भावनाएर ्ताको स्वतन्त्रता सिद्ध गर्छ।
यिनलाई पनि हेर्नुहोस्सम्पादन
आचारशास्त्रका मूल सिद्धान्त (गूगल पुस्तक ; लेखक - अनिरुद्ध झा, रामनाथ मिश्र)
Ethics, २d ed., १९७३. by William Frankena
'The Right and the Good (१९३०) by W. D. Ross
विकिमिडिया कमन्समा नैतिकता सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=नैतिकता&oldid=872893" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २४ अगस्ट २०२०, २२:१५
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २२:१५, २४ अगस्ट २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।